Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1212 lat
Ny valin-teny fohy nomen'i paoly (2Tes.2:3,4)
Alatsinainy 17 Sept.
Tao anatin’ny fotoana fohy nanelanelana ny 1 Tesalônianina sy ny 2 Tesalônianina, dia nanjary very hevitra momba izay tian’i Paoly hambara tao amin’ny taratasiny voalohany ny mambran’ny fiangonana tao Tesalônika. Notsoahin’izy ireo tamin’izany ny hevitra fa na ny Fiavian’i Kristy Fanindroany efa antomotra dia antomotra, na efa tonga izany saingy tsy tamin’ny fomba niharihary (2 Tes.2:2). Inona no valin-teny fohy nomen’i Paoly teo anatrehan’io olana io? “Tsy azo inoana velively ny fahamarinan’izany. Maro be tokoa ireo zavatra tsy mbola niseho hatramin’izao.”
Ny fahaverezan-kevitra tao Tesalônika no nahatonga an’i Paoly hanazava amin’ny fomba mivelatra be indrindra ireo toe-javatra hiseho amin’ny andro farany. Raha tsy nanao izany izy, dia tsy voatahiry ho antsika amin’izao andro izao koa izany.
Vakio ny 2 Tes. 2:3, 4. Inona no ambaran’i Paoly amintsika mikasika “ilay lehilahin’ota” voalaza ao amin’ireo andininy ireo? Inona no fitsipika hitantsika eto izay manampy antsika hahatakatra ny tian’i Paoly hambara?
Fehezan-teny tsy feno ny and. 3 sy 4 any amin’ny lahatsoratra voalohany niaingana. Tsy hita any amin’ny dikan-teny grika ny hoe “fa tsy ho avy izany”, saingy hita any amin’ny ankamaroan’ny dikan-teny hafa kosa. Tanisain’i Paoly ireo zavatra tsy maintsy hitranga mialoha ny hahatongavan’i Jesôsy. Hisy ny “fihemorana” (apostasia ny teny grika nandikana izany), ary haseho ilay “mpandika lalàna” aorian’izay. Voalaza ao amin’ny 2 Tes. 2:8-10 fa fomba fiasan’i Satana, mialoha indrindra ny fiavian’i Jesôsy, izany fanambarana izany (hodinihintsika akaikikaiky kokoa ny amin’io ao amin’ny lesona Alarobia). Mialoha io fanambarana ny faharatsiana io anefa, dia misy ny fotoana isehoan’ny “zava-miafina” sy ilay misakana (2 Tes. 2:6, 7).
Ny and. 4, dia filazalazana ny amin’ilay lehilahin’ota (na “mpandika lalàna”), izay miasa amin’ny fomba tsy miharihary aloha ary avy eo haseho amin’ny farany. Manohitra an’Andriamanitra izy, manandra-tena ho ambonin’izay rehetra atao hoe Andriamanitra, mipetraka ao amin’ny tempoly ary milaza ny tenany ho Andriamanitra mihitsy. Mampitodika ny saina any amin’ireo andininy ao amin’ny Testamenta Vaovao sy Taloha io andininy io. Mampahatsiahy an’i Satana ao amin’ny Zak. 3:1 ilay hoe “manohitra/miampanga”. Mamerina ao an-tsaina ilay tandroka kely voalazan’ny Dan.8 ny fanandratany ny tenany ho ambonin’Andriamanitra sy ny fakàny an-keriny ny toeran’Andriamanitra ao amin’ny tempoliny ao an-danitra. Mampahatsiahy an’i Satana ao amin’ny Isa. 14 sy ao amin’ny Ezek. 28 ny fanehoany ny tenany ho Andriamanitra; manondro ilay fahefana miteny ratsy ao amin’ny Dan. 11:36-39 ihany koa izany. Ny fanoritsoritana ilay lehilahin’ota, araka izany, dia ahitana ireo lafiny sasantsasany izay manondro an’i Satana mihitsy ary manondro mpanompon’i Satana ratsy fanahy iray izay miditra an-tsehatra eo amin’ny tantaran’ny fivavahana kristianina.
Amin’ny fomba feno hakingana manao ahoana avy no mety hahatonga antsika tsirairay hanana io karazam-pisainana io, araka izay hitantsika miseho eto, ao amin’ity “lehilahin’ota” ity?